Tamin’ny alatsinainy hariva no nitranga ny fanendahana, teo Andravoahangy Andrefana. Araka ny voalazan’ny fianakaviany akaiky, raha iny izy nidina avy any amin’ny faritra Andravoahangy ambony iny no notsenain’ny jiolahy iray misatroka «capuchon» tamin’ny elakelatrano hihazo ny « look’s ». Ilay kitapo teny aminy no nosintomin’ilay olondratsy fa tsy nomeny sady niantso vonjy izy. Nipoitra ny teo amin’ny manodidina saingy tazan-davitra avy eny am-baravarankely sy an-davarangana. Raha vao nahita izany ilay mpanao sinto-mahery dia ny kibon’ity mpitsabo vavy sy ny tarehiny no noratrainy tamin’ny zava-maranitra, dia lasa nitsoaka izy.
Araka ny filazan’ny mponina eo amin’ny manodidina efa mpihaodihaody eo amin’io lalankely io io tovolahy mpanao ratsy io na atoandro aza fa hatramin’ny nandratrany ity dokotera ity dia lasa nifindra toeram-pihazana indray izy. Manomboka amin’ny 11 ora alina no tena faritra mena Andravoahangy ambony raha ny voalazan’ny polisin’Antaninandro. Efa manao vela-pandrika ireo mpitandro filaminana.